2017-18 Matriculation exam in Myanmar starts today on7March 2018 – Myanmar Photo News
2017-18 Matriculation exam in Myanmar starts today on7March 2018. As this is the first day of exam, subject to sit for on the first day of exam is Myanmar. Exams will be end on 16 March. All together 840000 students will sit for this matriculation exam through out Myanmar for this 2017-18 academic year.
၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ပညာသင်​နှစ်​ တက္ကသိုလ်​ဝင်​တန်းစာ​မေးပွဲ =======================================
ယ​နေ့စတင်​​ဖြေဆိုသည့်​ မြင်​ကွင်းများ။ ————– မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွေကို သည်ကနေ့ မတ်လ ၇ရက်နေ့ မှ မြန်မာစာဘာသာကို စတင် ဖြေဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ သည်ကနေ့ကစပြီး မတ်လ ၁၆ရက်နေ့ အထိ ဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရအထက် ကျောင်းတွေ ၊ ကိုယ်ပိုင်စာသင်ကျောင်းတွေကနေ ကျောင်းသားပေါင်း ၈သိန်းလေးသောင်းကျော်ဟာ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုဖို့ စာရင်းပေးသွင်း ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။